musha Yakabatana Partner Chirongwa
Yakabatana Partner Chirongwa
Affiliate chirongwa mukana wakanaka wekuti iwe uwane mari nekutengesa yedu yekuhwina-kuhwina data kupora software zvigadzirwa. Tinogamuchira chero munhu, kubva kuvanhu, mabhizinesi madiki kumagazini, masuo, uye zvitoro.
DataNumen chirongwa chekubatana ndicho chakanakisa. Sei?
Yakakwira Commission, inoshanduka muzana muzana system.
Pakutengesa kwega kwega kwaunogadzira, iwe unowana kwete isingasviki 20% yehuwandu hwehuwandu hwekutengesa. Commission inowedzera zvichienderana nebasa rako! Iyo yepamusoro yekutengesa vhoriyamu yeyedu data kudzoreredza zvigadzirwa ndeye, iyo yakawanda muzana yako ichave iri.
Isu tinogona kuenderera takabatana mushambadziro wekushambadzira newe. Kune mitengo yakasarudzika yevanobatsirana, pamwe nezvakawanda mibairo, kutengesa zororo, tsamba yakananga uye nezvimwe zvakawanda. Iwe unogona kugara uchiita chikumbiro chekuwana zvekushambadzira zvemhando ipi neipi. Iwe unogona zvakare kutarisira komisheni muzana kuwedzera kana uchironga nhau posting, kushambadzira mishandirapamwe, uye kushambadzira zviito. Dzimwe nguva isu tinotopa chikamu chikamu zviito zvakadaro. Iwe une zano? Taura nesu!
Chero mibvunzo, mazano uye zvikumbiro zvichafungidzirwa uye iwe unowana yepamusoro-soro mhinduro mune ipfupi nguva inogoneka. Ndokumbirawo mushandise fomu rekupindura kubvunza chero mubvunzo kana kuita chikumbiro chine chekuita nehukama hwedu chirongwa.
Mushure mekusayina needu ehukama chirongwa, isu tinopa iwe wekubatana ID kwauri.
Neichi chakabatana ID, unogona kugadzira yakasarudzika odhiyo link yechero ipi yezvigadzirwa zvedu. Kana mutengi wako akatenga kuburikidza neiyi yakasarudzika yekubatanidza link, ipapo isu tichaona yako kutumira uye tinoti iyo komisheni kwauri.
Neichi chakabatana ID, iwe unogona zvakare kugadzira yakasarudzika chinongedzo kune chero peji rewebhu pane yedu kambani saiti. Kana mutengi wako akashanyira peji rewebhu kuburikidza neiyi yakasarudzika yekubatanidza, cookie inochengetedzwa pakombuta yake neakabatana ID yakachengetwa mairi. Zvino, kana mutengi akatenga zvigadzirwa zvedu munguva inotevera, iyo kuki inozozivikanwa uye iyo komisheni ichapihwa iwe. Iyo cookie inoshanda kwemwedzi mitanhatu chero bedzi mutengi wako akaita sarudzo yake yekutenga mukati memwedzi mitanhatu kubva paakatanga kushanyira peji redu rewebhu, iwe unowana kutumirwa kubva pakutenga kwake.
Tora started izvozvi
Yedu yakabatana chirongwa chinotarisirwa ne MyCommerce.com uye FastSpring.com, vese vari vatungamiriri vakasimbiswa mumapurogiramu ehukama ehurongwa. Iwe unogona kusarudza iyo imwe maererano nezvaunoda. Chirongwa chekubatana chiri nyore kwazvo. Iko hakuna chakavanzika costs uye ndizvo vakasununguka kuti isayine.
Bhalisa MyCommerce.com Chirongwa Chekubatana
Nyoresa FastSpring.com Yakabatana Chirongwa
Mushure mekunyora, isu tinokutumira iwe email ine yako yakabatana ID uye mirairo kune start kuitira kuti iwe uwane mari pakarepo!
Kana iwe uchitova uine yakabatana account paMyCommerce.com kana FastSpring.com, ndokumbirawo upinde mudare rako rekutonga uye uwane isu kuti tijoine uye start. Yedu mutengesi ID ndeye 39118 paMyCommerce.com uye datanumen on FastSpring.com.